Buyisela i-iPhone, uyazi ukuba ungayifomatha njani i-iPhone? | IPhone iindaba
UMiguel Hernandez | | iPhone, Izifundo kunye neencwadana
I-iPhone inenkqubo yokusebenza okuzinzileyo kweselfowuni esinokuyifumana, kucacile ukuba sibhekisa kwi-iOS. Nangona kunjalo, akukho nto yenziweyo engenangqondo, kwaye i-iOS ayizukukhetha. Ngaphezulu kwesihlandlo esinye sizakubonana ngokuchasene neentambo kuba inkqubo yokusebenza iye yafumana impazamo ebalulekileyo Kwaye asizukukhetha ngaphandle kokubuyisela i-iPhone.
Kungenxa yoko le nto namhlanje kwi-iPhone eyiyo sifuna ukusombulula onke amathandabuzo akho ngesibetho esinye, siza kufundisa Zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokufomatha i-iPhone kwaye luhlobo luni lweengxaki onokuthi ujongane nazo. Ngale ndlela uya kuhlala unesixhobo sakho ukuba sijongane nokusetyenziswa kwaso.
Okokuqala, siza kugqiba ukuba igama elithi "ifomathi" kwimeko ye-iOS linenye intsingiselo, kuba iApple ibone kufanelekile ukusebenzisa igama "ukubuyisela" njengegama elifanayo "kwifomathi" okanye "ukucima i-iPhone." Kungenxa yoko Sicebisa ukuba uziqhelanise nale migaqo kwaye ungothuki, kuba ukusukela ngoku siza kusebenzisa igama elithi buyisela.
1 Indlela yokubuyisela i-iPhone ngePC ngeTunes
2 Fometha i-iPhone ngaphandle kweTunes
3 I-iPhone yam ibonisa uphawu lwe-Apple kwiscreen
4 I-iTunes yokukhuphela i-iOS ecothayo, ndingayikhuphela phi i-iOS?
5 Ndifumene i-iPhone, ndingayifomatha?
Indlela yokubuyisela i-iPhone ngePC ngeTunes
Siyakhumbula ukuba xa sibuyisela i-iPhone siza kuyicima ngokupheleleyo idatha kwi-iPhone yethu, ke iifoto zethu okanye usetyenziso aluzukugcinwa, isixhobo siya kufumaneka njengoko sinjalo xa sikhupha ngaphandle kwebhokisiKe ngoko, kubalulekile ukuba ucace malunga nezizathu zokuba kutheni uzokwenza ukubuyiselwa kwaye uthathe amanyathelo afanelekileyo.
Le yeyona nto iqhelekileyo yokucinga. Komnye umsitho ukusebenza kwesixhobo kuyehla okanye sijamelene nokuphinda-phinda ibug, Kungenxa yoko le nto sigqibe kwelokuba sifezekise isixhobo iTunes. Ngokuqinisekileyo oku kukhethwe sisininzi kwaye yeyokuqala esiza kukufundisa yona. Ungaphoswa linyathelo elinye lenkqubo, kuba yenye yezona zilula siya kuzifumana.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuqinisekisa ukuba sine iTunes efakiweyo kwaye ihlaziyiwe kuhlobo lwamva nje, kuba iTunes ihlala ineengxaki zokubuyisa isixhobo ukuba asihlaziywanga. Ngoku Siza kusebenzisa umbane wethu - intambo ye-USB ukuqhagamshela i-iPhone kwiPC okanye kwi-Mac yethu. Ke nini sivula iTunes, Siza kubona i-icon ye-iPhone yethu kwikona ephezulu ngasekhohlo, siya kucinezela kwimeko yokuba iwindow pop-up ayixhuma ngokuzenzekelayo.
Phakathi kwalo lonke ulwazi, kwicandelo eliphezulu lasekunene siya kuba no "Phendla uhlaziyo" kunye "Buyisela i-iPhone ...«, Esi sesibini sinomdla kuthi. Kubalulekile ukuba senze ukhuphelo kuqala, zombini nge-iCloud nange-iTunes (ekukhetheni kwethu) kwimeko yokuba siphulukane nolwazi. Kule nto siza kusebenzisa amaqhosha "Yenza ikopi ngoku" esiwafumana ngezantsi kwezikhetho zangaphambili. Xa ugqibile yogcino siya kuya Useto> iCloud> Fumana i-iPhone yam ukukhubaza olu khetho kwaye uqhubeke Cofa ku "Buyisela i-iPhone", ngalo mzuzu ukhuphelo lwenkqubo yokusebenza luya kuqala kwaye i-iPhone yethu iya kubuyiselwa. Xa ugqibile yonke inkqubo nge-iPhone yethu iya kuqala kwakhona amaxesha amaninzi, Siza kuba ne-iPhone ibuyiselwe ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kwedatha, njengaxa sayikhupha ebhokisini.
Fometha i-iPhone ngaphandle kweTunes
Olunye ukhetho esinalo olufumanekayo kwaye mhlawumbi olungaziwa kancinci kukubuyisela i-iPhone ngaphandle kokuyixhuma kwi-iTunes. Uncedo olusinika olu khetho ayisiyiyo kuphela yokuba asizukufuna ukusetyenziswa kwePC / Mac, kodwa kwimeko yokufuna ukubuyisela i-iPhone ngohlobo olusezantsi lwe-iOS, I-iTunes iya kucela uhlaziyo kwaye asizukukhetha ngaphandle kokwenza njalo. Kwimeko apho sibuyisela isixhobo ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes, ngokuthe ngqo kwicandelo leseto, siya kuqhubeka nokugcina uhlobo olufanayo lwe-iTunes. Nangona kunjalo, i-purist ye-iOS ihlala isithi olu hlobo lokubuyiselwa alucoceki ngokupheleleyo kwimemori yesixhobo kwaye linokuvelisa iibugs, nangona ayisiyiyo into ephindaphindayo okanye eqinisekisiweyo.
Ukucima lonke ulwazi kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes kufuneka siye kwisicelo Useto ye-iPhone yethu, kanye ngaphakathi siza kuya kwicandelo "Ngokubanzi" kwaye siya kubona ukuba ukhetho lwe "Buyisela" yeyokugqibela kuluhlu. Ngaphakathi kuyo siya kufumana iindlela ezahlukeneyo zokucima idatha kwi-iPhone esiza kuchaza:
Hola: Icacisa nje useto lwesixhobo, ezinje ngokubonisa ukhetho kunye nayo yonke into enokuyenza ujongano lomsebenzisi.
Cima umxholo kunye noseto: Izakucima yonke idatha kwi-iPhone, kule meko ligama elichanekileyo "lokuyifomatha"
Hlaziya useto lwenethiwekhi: Uyakulibala kwaye ucime ngokupheleleyo zonke iinethiwekhi zethu ze-WiFi kunye neBluetooth, siyakhumbula ukuba inokuchaphazela amagama agqithisiweyo agcinwe kwi-iCloud Keychain.
Cwangcisa kwakhona isichazi-magama sekhibhodi.
Misela kwakhona isikrini sasekhaya.
Hlela indawo kunye nemfihlo.
I-iPhone yam ibonisa uphawu lwe-Apple kwiscreen
Le yenye yeengxaki eziqhelekileyo esizifumana kwizixhobo ze-iOS eziye zanengxaki enkulu kwinkqubo yokusebenza. Kule meko asizukukhetha ngaphandle kokufomatha isixhobo ngeTunes. Amanyathelo ekufuneka siwenzile ayafana, nangona kunjalo, kuya kufuneka sibeke isixhobo se-iOS kwinto eyaziwa njenge «Imo ye-DFU»Ukuze ukwazi ukufikelela kuyo ukusuka kwi-iTunes kwaye uqhubeke nokubuyiselwa, kuba xa i-iPhone ibonisa kuphela iapile ye-Apple kwiscreen kungenxa yokuba ikwindawo yokuvula kwakhona kwaye asizokwazi ukufomatha.
Ukubeka i-iPhone Kwimo ye-DFU Siza kuqhagamshela i-iPhone kwi-PC / kwi-Mac ngokusebenzisa i-USB-Lightning kwaye sizakucinezela iqhosha laseKhaya ngaxeshanye xa sicinezela Amandla ombane (uMqulu- kunye naMandla kwimeko ye-iPhone 7), Imizuzwana emi-5 sizakubamba zombini zicinezelwe, emva koko uqhubeke nokucofa ubambe kuphela iKhaya okanye iVolumu- iqhosha. Ngelo xesha, ukuba siyenze ngokuchanekileyo, uphawu lwe-iTunes luya kubonakala lusicela ukuba siqhagamshele i-iPhone kwiPC okanye kwi-Mac ngokuvula i-iTunes. Musa ukuphelelwa lithemba xa ungayifumani okokuqalaAkululanga ukwenza kakuhle njengoko kubonakala kwaye kunokukuthatha ngaphezulu kweyodwa.
Nje ukuba i-iTunes ibhaqe i-iPhone yethu kwimowudi ye-DFU, isikrini esivelayo siza kuvela sicela ukuba sikhethe phakathi kokuhlaziya kunye nokubuyisela i-iPhone, ngokucacileyo siza kukhetha ukubuyisela ukufaka inkqubo yokusebenza kwakhona. U-LNgelishwa nje ukuba i-iPhone ikwimo ye-DFU asizukukwazi ukwenza iikopi zokugcina, ke kuya kufuneka sithi ndlela-ntle kuyo yonke idatha yethu, kodwa kuphela kwendlela ukuze sikwazi ukubuyisa i-iPhone yethu kwakhona.
I-iTunes yokukhuphela i-iOS ecothayo, ndingayikhuphela phi i-iOS?
Ngaphezulu kwesihlandlo esinye, iiseva zika-Apple ze-iTunes kunye ne-iOS azizukuchaneka, ngenxa yoko i-iTunes inokukhuphela uguqulelo lwe-iOS lwe-iPhone yakho icothe kakhulu. Ukuba uziva ungalindelanga, sicebisa ukuba ufumane ngqo iIPIP ezichanekileyo ngesixhobo sakho kwaye uyifake ngqo kwi-iPhone yakho. Le nkqubo iya kufana nangaphambili kwaye iya kufuna zombini iTunes kunye nePC / Mac. Okokuqala, into ekufuneka siyenzile kukukhuphela uguqulelo oluhambelanayo lwe-iOS ngesixhobo sethu esiphathwayo, kuba oku siza kukucebisa LE WEBHU apho unokukhuphela khona uguqulelo lwe-iOS oludingayo ngaphandle kwengxaki ezininzi. Kodwa siyakukhumbuza ukuba iApple ikuvumela kuphela ukuba ufake uhlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza kwi-iPhone, ezo zisayiniweyo, ukuba ufaka uhlobo lwakudala lwe-iOS iserver ayizukungqinisisa isixhobo kwaye awuyi kuba nakho yenze isebenze.
Nje ukuba ifayile ekhutshelweyo siza kuya kwi-iTunes kunye ne-iPhone edityaniswe ngentambo, emva koko siza kucofa ku «Buyisela i-iPhone ...» ngelixa sibambe iqhosha le «Shift» kwiWindows okanye «alt» kwimeko ye-macOS. Ukuba senza oku sinokubona indlela ifayile ekuvulwa ngayo kwaye sinokukhetha ngokulula iIPIPS ezihambelana ne-iPhone yethu. Nje ukuba ukhethe, uya kubona ukuba inkqubo yokubuyisela iya kuqala nge-bar yenkqubela, ungalahli ithemba, njengoko ihlala ithatha ixesha.
Ndifumene i-iPhone, ndingayifomatha?
Inyani yile yokuba, ungasebenzisa nayiphi na kwezi ndlela esikufundise yona kwaye uyifomathile, nangona kunjalo, okoko i-iOS 7 zonke izixhobo ze-iOS zidityaniswe kwi-ID yomsebenzisi ngamnye, Ke ngoko, xa isixhobo senziwe ngenjongo, xa uqala inkqubo yoqwalaselo, iya kukucela igama eligqithisiweyo le-ID ye-Apple edityaniswe kuyo, ke elona nyathelo lisengqiqweni kukucela uSiri ukuba "yeyiphi le iPhone?" ukukunika ulwazi lokunxibelelana kwaye ulubuyisele kumnini walo, kuba ngekhe ube nakho ukulusebenzisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Buyisela i-iPhone
Ndiyenza njani ukuba isebenze i-SIRI ukufumana idatha yomnini ngelixa ikwiscreen sokuvula? Kwaye okona kubaluleke ngakumbi, xa ibuyisiwe, okanye icinyiwe kwi-icloud.com, olo lwazi alucinywanga?
U-Spotify uyavuma ukuhlawula i-Sony encinci kwimifudlana yokutshintshela ukuthintela ukufikelela kwii-albhamu ezintsha
Umngeni weTennis weTennis ngoku ufumaneka nge SEGA Ngonaphakade